Xiaomi dia handray anjara amin'ity taona ity amin'ny Google I / O 2016 | Androidsis
Rehefa mandeha ny fotoana mahita vaovao sasany izahay an'ny Google I / O 2016. Fihaonambe ho an'ny mpamorona izay somary simba tamin'ny fanantenana ny hahafantatra, nandritra ny roa volana mahery, ny sasany amin'ireo mampiavaka ny Android N miaraka amin'io topi-maso io ho an'ireo mpamorona izay natomboka ho an'ny fitaovana Nexus.
Hugo Barra izao, ilay iray, izay nanambara izany tao amin'ny Twitter-ny Xiaomi dia handray anjara amin'ny Google I / O 2016. Fihaonana tsy azo lavina ho an'ireo mpankafy Android hahita ny vaovaony rehetra avy amin'ny teny fototra sy ho an'ireo mpamorona avy amin'ireo fivoriana ireo izany dia hanana ny fankalazany manomboka rahampitso. Fandraisana anjara manokana izay manomboka ny fanantenana momba ny antony manosika ny fahatongavan'i Xiaomi amin'ity fihaonambe ity.
Izany Hugo Barra dia exGoogler taloha, ary nampiahiahy ihany koa hatrany ny mety ho fifandraisana ambadiky ny seho an'ny Google sy Xiaomi. Ka ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa roa tonta dia mampiseho amintsika ny halehiben'ny fiaraha-miory amin'izy samy izy.
Ankoatra izay dia faly aho nizara fa Xiaomi dia ho anisan'ny Google I / O. Fijerena kely ny zavatra ho hitanao avy amin'i Mi at # io16 pic.twitter.com/GP3HHE3F6c
- Hugo Barra (@hbarra) Enga anie 17, 2016
Raha misy zavatra azonao atolotra anay vaovao vitsivitsy Xiaomi ao amin'ny Google I / O 2016 misy ifandraisany amin'ny televizion'izy ireo mifandraika amin'ny Android TV sy ny fijerena manokana izay homena ny Internet of Things. Betsaka ny fandaharam-potoana kasaina hatao mifandraika amin'ity karazana fampiasa ity, koa tsy hahagaga antsika raha toa i Barra mihitsy no niseho teny an-tsehatra nanambara ny fifanarahana azo atao amin'ireo izay mahagaga.
Inona no mampiakatra fanantenana bebe kokoa ho an'ny teny fototra hitenenan'i Sundar Pichai amintsika ny vaovao rehetra sy ny fahombiazana azo tamin'ity taona ity hatramin'ny fotoana farany niakarany an-tsehatra. Fantatsika sahady fa i Google, toy ny haitao hafa, dia tia mandefa tarehimarika hanehoana ny fanjakan'ny Android, zavatra nianarantsika andro vitsivitsy lasa izay rehefa nihatsara aza izy io ny tarehimarika napetrakao manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia handray anjara amin'ity taona ity amin'ny Google I / O 2016